Yakanakisa Ceramic Mavharuvhu Mugadziri uye Fekitori | SICER
1. Sicer yakafuma ceramic zvinhu system, uye inogona kupa akasiyana siyana zvedongo zvinhu uye yekuzvidzora-yega zvinhu zvigadzirwa;
2. Pasi pemamiriro ekushanda akafanana, hupenyu hwebasa hwevheramic vharuvhu inopfuura ka5-10 zvakapetwa kavhavhavha yesimbi;
3.Kushandisa yakasarudzika yakatarisana kumusoro tekinoroji yeceramic bhora vharuvhu kugadzira zvedongo rakaoma chisimbiso kuva rakavimbika uye rakatsiga;
4.Kupfuma ruzivo muvharuvhu zvedongo zvinhu kusarudzwa, inogona kuenderana neyakanakisa sarudzo sarudzo maererano nemamiriro ekushanda (kumanikidza, kuwanda, kwepakati, nezvimwewo);
5. Magetsi / pneumatic / kure kudzora pane-off switch, optimum dhizaini dhizaini uye kugadzirwa chaiko kuti udzivise kuparara nekukurumidza uye kuona kuvhura kwevhavha nekuvhara zvakasununguka uye kugadzikana kwetorque;
6. Sicer yakagadzira nhevedzano yezvinhu zvitsva zvederamic vheji zvigadzirwa, senge zvedongo C vharuvhu, zvedongo slide vharuvhu uye zvedongo angle vharuvhu, uye zvinobudirira akazvikwidziridza kumusika;
7. Inoshandiswa zvakanyanya mune dzakasiyana acid uye alkali fluid, yakanyanya tembiricha mhute, madhaka, isina mafuta oiri kutakura uye yekuchengetedza system. Icho chinotsiva chakanakira titanium simbi vharuvhu uye Monel vharafu pasi pesimba ngura mamiriro. Makumi ezviuru emavheriki eceramic emhando dzakasiyana siyana akaiswa.
8. Inoenderera yehunyanzvi kubvunza sevhisi usati uye shure kwekutengesa.
Iyo hombe yepasirese imwechete marasha-ku-oiri chirongwa
Iyo purojekiti nyowani yechipfuwo chemakemikari bhizinesi
1. Zvinoenderana nemamiriro ekushanda uye zvimwewo zvinoshanda mamiriro epombi plunger, SICER yaizogadzira yakasarudzika zvedongo nzira yekutsvaga uye module kusarudza.
2. Zvese zviri zviviri zvinoshanduka uye zvakaomarara chisimbiso zvinogona kuongororwa kune zvakasiyana zvinodiwa.
3. Paticular zvedongo zvinhu uye pachezvayo lubrication zvinhu zvinogona kupihwa kune matchaing yekukwesana vaviri kuti udzikise kumwe kubrasion.
4. Electric, pneumatic, uye remote control zvinogona kuitwa nekutsetseka kupatsanura kuomesa mavhavha.
Vakasiyana Ceramic Zvishandiso zvakasiyana zvine chekuita nekushandisa.
1. Alumina (Al2O3) ndechimwe chezvinhu zveupfumi zvedongo, ine ngura huru uye abrasion kuramba zvivakwa.
2. Zirconium (ZrO2) ndiyo yakasimba simba uye kuomarara pakamuri tembiricha yeese akagadzirwa maceramiki. Asi iyi ZrO2 ine tembiricha inoshanda, iyo Max tembiricha iri 320 degC.
3. Silicon Nitride ndeimwe yeakakura zvedongo zvinhu kunyanya zvinoshandiswa kune yakanyanya kupisa tembiricha, yakakosha dzimba uye zvedongo zvikamu bvumidza mhinduro tembiricha inosvika 950 degC.
4. Silicon Carbide ndiyo yakanyanya kuomarara zvinhu zvese zvakagadzirwa neseramiki, mune rimwe izwi SiC kuomarara padhuze neDiamond. Asi kudzika kwakanyanya kutsemuka kweSiC kushomeka kukuru kwezvikamu zvedongo, zviri nyore kuputswa.
Pashure: SICER - Ceramic Plunger
Zvadaro: Ceramic Yakachena Cone
Ceramic Yakarongedzwa Valve
Yakazara Yakarongedzwa Ceramic Mavharuvhu